सरकार विस्तार आज, अर्थमन्त्रीमा को आउँदै ? | गृहपृष्ठ
Home मुख्य खबर सरकार विस्तार आज, अर्थमन्त्रीमा को आउँदै ?
मुख्य खबर, समाचार 1,109 views
सरकार विस्तार आज, अर्थमन्त्रीमा को आउँदै ?
फागुन १४, काठमाडौं (अस) । फागुन ३ गते प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीले सोमवार माओवादी केन्द्रसहितका मन्त्री समावेश गरेर मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न लागेका छन् । एमालेका दुई मन्त्रीलाई लिएर सपथग्रहण गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले १० दिनपछि एमाले र माओवादी तथा सङ्घीय समाजवादी फोरमलाई समेत समेटेर मन्त्रिमण्डल विस्तारको तयारी गरेको बुझिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्मा थपिने मन्त्रीका लागि सोमवारै सपथग्रहणको तयारी गरिएको छ । यसका लागि राष्ट्रपति कार्यालयलाई जानकारी गराईसकिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले बताएको छ । तर, एमाले र माओवादीबाट को को मन्त्री बन्दैछन भन्ने बारेमा भने जानकारी दिइएको छैन् । प्रधानमन्त्रीसहित अन्य दुई जना एमालेबाट सरकारमा सहभागि भैसकेका छन । सोमवार एमालेका थप ७ र माओवादीका ७ मन्त्रीले सपथ ग्रहण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
एमालेले प्रधानमन्त्री सहित अर्थ, परराष्ट्र, रक्षा, भौतिक पूर्वाधारसहितका मन्त्रालय पाएको छ । एमालेबाट महासचिव ईश्वर पोखरेल, सचिव प्रदीप ज्ञवाली, योगेश भट्टराई, रवीन्द्र अधिकारी, रघुवीर महासेठ र नारदमुनि राना मन्त्री बन्ने लगभग पक्का भएको बताइएको छ । एमालेले सूर्य चिन्हमा उठेर जितेका हृदयश त्रिपाठीलाई पनि मन्त्री बनाउन लागेको छ । यसअघि एमालेबाट लालबाबु पण्डित जनसङ्ख्या र थममाया थापा महिला विकास मन्त्री भइसकेका छन् ।
एमाले र माओवादीवीच मन्त्रालय भागवण्डाको विषय मिलिसकेपनि दुबै पार्टीबाट मन्त्रीमा आकांक्षीहरु धेरैभएपछि मन्त्री छान्न ढिलाई भएको हो । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफ्नो पार्टीबाट मन्त्री बन्नेको नाम प्रधानमन्त्रीलाई बुझाईसकेका छन् । जसमा माओवादीबाट सरकारको नेतृत्व गर्दै गृहमन्त्रीका रुपमा राम बहादुर थापा जाने पक्का भएको छ । माओवादीले गृहसहित जलस्रोत तथा ऊर्जा, श्रम रोजगार महिला तथा सामाजिक सुरक्षा, कृषि तथा सहकारी, उद्योग वाणिज्य र आपूर्ति, शहरी विकास र वन तथा वातावरण मन्त्रालय सम्हाल्ने छ । बाहिर चर्चामा आएअनुसार रामबहादुर थापासहित पम्फा भुषाल, वर्षमान पुन, शक्तिबहादुर बस्नेत, मातृका यादव, गिरिराजमणि पोखरेल र माओावादी अध्यक्ष दाहालकी बुहारी बीना मगर मन्त्री बन्ने बताईको छ ।
अर्थमन्त्रीमा को ?
सबैको चासो यतिबेला देशको अर्थमन्त्री को बन्छ भन्नेमा छ । एमालेको भागमा रहेको अर्थमन्त्रीमा महासचिव ईश्वर पोखरेलको दावी पहिलो छ । ओली सरकारले राष्ट्रिय सभामा मनोनित गरेका तीनमध्ये एक अर्थशास्त्री डा. युवराज खतिवडालाई भावी अर्थमन्त्रीका रुपमा हेरिएको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतले उनको मनोनयन रोकेपछि महासचिव पोखरेल सहित प्रदिप ज्ञवाली, सुरेन्द्र पाण्डे, विष्णु पौडेलको नाम चर्चामा रहेको छ । बाहिर जानकारी नदिएपनि अर्थमन्त्रीमा ईश्वर पोखरेल नियुक्त हुने बुझिएको छ ।
चालू आवमा देशको बजेट घाटामा गएका समयमा बन्ने अर्थमन्त्रीका लागि आगामी समय चुनौतीपूर्ण देखिन्छन् । आर्थिक विकास, समृद्धि, आर्थिक बृद्धिदर, पुनर्निर्माण, ठूला आयोजनामा आर्थिक स्रोतको खोजी र वाम गठबन्धनले चुनावका बेला जनतामा प्रतिज्ञा गरेका विकास निर्माण तथा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लगायतका क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका साथै सात प्रदेश, ७ सय ५३ स्थानीय तहका लागि पनि ठूलो रकमको व्यवस्था गर्नुपर्ने भएकाले देशको ढुकुटी सम्हाल्न आउने अर्थमन्त्रीका लागि आगामी दिन सहज छैन् । तथापी स्थायी सरकारमा पाँच वर्ष अर्थमन्त्री बन्न पाउने भाग्यशाली अर्थमन्त्रीले यी सबै कामको व्यवस्थापन गर्न सकेमा इतिहासकै सफल अर्थमन्त्रीका रुपमा लिन सकिन्छ ।
४ बजे शपथ ग्रहण
मन्त्रिमण्डल विस्तारको तयारी गरेसँगै सोमवार ४ बजेका लागि राष्ट्रपति भवन, शीतल निवासमा मन्त्रीहरुको शपथ ग्रहण कार्यक्रम तय भएको छ । पछिल्लो संशोधित कार्यसम्पादन नियमावलीअनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित १८ मन्त्रालय हुनेछन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका प्रमुख स्वकीय सचिव भेषराज अधिकारीले सोमवार ४ बजे शपथ ग्रहणको कार्यक्रम तय भएको जानकारी दिएका छन् ।